Bibidin'ny arisiva andro
Hikarakara ireo mpitsoa-ponenana
myAvibase dia mitatitra
Mpikambana ao amin'ny Flickr
Misy ihany koa Avibase amin'ny fiteny manaraka:
Hanatsara fandikan-teny tsara kokoa
Ny fandikan'ity pejy ity dia vita tamin'ny fanampian'ny fitaovana fandikan-teny Google automatique. Hanatsara fandikan-teny tsara kokoa
Welcome Guest | Hiditra | Register | | myAvibase | Miala
Avibase dia tranonkala tsy dia ara-barotra nampiantranoana tany Kanada, natokana voalohany mba hanangonana sy hizara vaovao momba ny vorona eto amin'izao tontolo izao. Avibase dia tsy manangona na mampiasa fampahalalana manokana momba ny mpampiasa sy ny mpitsidika amin'ny tanjona ara-barotra. Na izany aza anefa dia manangona fampahalalana manokana izay ampiasaina amin'ireto fomba manaraka ireto izy.
Voalohany, ho an'ny pejy izay mitaky ny fanamarinana ny fisoratana anarana (fampidirana sy ny tenimiafina, toy ny myAvibase sy ny fitaovana amin'ny tranonkala Avibase), dia mitahiry cookie izay mipetraka amin'ny solosaina fotsiny ianareo mba hikatsahana ny fotoam-pivoriana. Raha mamorona ny mombamomba anao manokana momba an'i Avibase ianao, ny anaranao, ny adiresy imailaka, ny fiteny sy ny safidy hafa, ary ny lisitry ny mijery miaraka amin'ny lisitry ny lisitrao, dia ho voatahiry ao anaty servers. Ity vaovao ity dia tsy hizara amin'ny antoko fahatelo ary ampiasaina fotsiny mba hahafantarana anao mandritra ny fampiasanao ny tranokalan'i Avibase. Ny anaranao dia azo aseho amin'ny sehatra ampahibemaso (ohatra ny tatitra momba ny tatitra ambony indrindra), saingy afaka mangataka ny hanaisotra ny anaranao amin'ny mombamomba anao ianao. Azonao atao ihany koa ny manazava ny mombamomba anao sy ny angon-drakitra mifandraika amin'izany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alàlan'ny mombamomba an'i Avibase anao ary tsindrio amin'ny "Alefaso ny profil".
Avibase koa dia mampiasa ny Google Analytics, tolotra web analytics izay omen'ny Google, Inc. Ny Google Analytics dia mampiasa cookies, izay rakitra an-tsoratra napetraka ao amin'ny solosainao, hanampy ny tranonkala hamakafaka ny fomba ampiasain'ireo mpampiasa ilay tranonkala. Ny vaovao nomen'ny cookie momba ny fampiasanao ny tranokala (anisan'izany ny adiresy IP anao, na dia tokony ho voafetra aza izany satria miankina amin'ny fandefasana IP fanamarinana ny IP) dia hivezivezy sy hamahan'i Google amin'ny servisy any Etazonia. Google dia hampiasa ity fampahalalana ity amin'ny tanjon'ny fanombanana ny fampiasanao ny tranokala, manangona tatitra momba ny asan'ny tranokalan'ny mpampiasa tranonkala ary manome tolotra hafa mifandraika amin'ny fampiasana tranonkala sy ny fampiasana aterineto. Google dia mety handefa izany vaovao izany any amin'ny antoko fahatelo izay takiana amin'izany hanao lalàna, na ireo antoko fahatelo toy izany dia mandrindra ny vaovao ao amin'ny Google. Google tsy hampifandray ny adiresy IP miaraka amin'ny angon-drakitra hafa nataon'i Google. Azonao atao ny mandà ny fampiasana cookies amin'ny fisafidianana ny sehatra mety amin'ny navigateur anao, na izany aza azafady, tadidio fa raha manao izany ianao dia mety tsy afaka mampiasa ny fonctionnaire feno amin'io tranonkala io. Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, manaiky ny fanitsiana ny angona momba anao amin'ny Google amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza etsy ambony.
Amin'ny ankapobeny dia miezaka manaiky ny anarana rehetra ny mpandray anjara aho izay nanampy ahy hanatsara an'i Avibase nandritra ny taona. Raha hita ao amin'ny fanekena ny anaranao, saingy te hanala azy ianao, azafady fotsiny mifandray amiko . Raha mahatsapa ianao fa tokony hisy ny anaranao, azafady mba ampahafantaro ahy ihany koa, azo antoka fa ho tompon'andraikitra amin'ny anjarako (miala tsiny aho).
Avibase no zon'ny mpamorona an'i Denis Lepage. Ny fanomezan-dàlana dia omena alalana hanao rohy mankany amin'ny pejy sasany amin'ny tranokala, ao anatin'izany, saingy tsy voafetra ny lisitry ny lisitry ny pejin'ny faritra sy ny pejin'ny profil.
Ireo sary sy sary hita ao amin'ny Avibase dia samy manaiky ny zon'ny mpamorona azy avokoa, raha tsy misy fanamarihana manokana amin'ny alalan'ny lisansa momba ny famoronana. Ny sary rehetra naseho tao amin'ny Flickr API dia mitoetra ho tompon'ireo mpiara-miasa aminy voalohany. Avibase dia tsy mitazona sary miafina ao an-toerana ao amin'ny API, fa manohana ny rohy amin'ny dikan-teny bitika. Ny sary rehetra dia ahitana ny anaran'ny mpanoratra (araka ny nomena amin'ny Flickr) ary mifandray amin'ny pejin'ny mpanoratra ao amin'ny Flickr. Ny saripika notsongaina fotsiny tamin'ny fikarohana public avy amin'ireo mpanoratra dia hita ao Avibase. Ity dia matetika ny toerana voafetra amin'ny Flickr, izay azo ovaina amin'ny tompon'ny kaonty.
Raha mpaka sary ianao amin'ny kaonty Flickr, ary te hiangavy ny sarinao fa tsy aseho amin'ny sary madinika ao Avibase intsony, dia manana safidy 2 ianao farafaharatsiny. Voalohany, azonao atao ny mifandray amiko mba hangataka ny tsy hiseho intsony ny sarinao, ary ho faly aho hampandefitra raha vao azoko atao. Rehefa manao izany ianao dia azafady ihany koa ny anaranao ny kaontinao flickr, mba hahafahako mamantatra sy mametraka sivana iray mba hisakanana ny sarinao tsy hiseho. Ny safidy faharoa dia ny manova ny fananana ny sasantsasany na ny sary rehetrao mba tsy hahitana azy ireo intsony amin'ny fikarohana public . Azo atao amin'ny global manontolo ao amin'ny kaontinao Flickr izany, eo ambany Privacy sy alalana , na ho an'ny sary tsirairay. Taorian'ny nanovanao an'io toe-javatra io, dia azo aseho amin'ny tsy misy sary ao Avibase ny sary, ary hofoanana tanteraka.
Ny sary avy amin'ny sariitatra Avibase dia nampiasaina niaraka tamin'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny tompony tompon'ireo zon'ny mpamorona, izay matetika no voamarik'izy ireo amin'ny familiana ny totozinao amin'ny sary na tsindry amin'ny sary.
Ny fahazoan-dàlana hampiasa ny sary naseho tao amin'ny Avibase tsy azo avela avy amiko ary tokony hangatahana mivantana amin'ny tompon'ny copyright. Ny sasany amin'ireo sary Flickr dia azo ampiasaina eo ambanin'ny Creative Commons License, fa andraikitrao amin'ny maha-mpampiasa anao ny fiantohana izay mety ho azonao ary ny hitazomana ny fepetra momba ny fahazoan-dàlana manokana. Ity vaovao ity dia azo jerena ao amin'ny tranokala Flickr rehefa manindry sary.
Raha manana sary tianao hatao ianao amin'ny alàlan'ny Avibase, ny zavatra rehetra tokony hataonao dia ny manao ireo sary hita ao amin'ny kaonty Flickr, ary azonao antoka fa mamela fikarohana manokana ny mombamomba anao.
Mitatitra votoaty tsy mendrika
Raha te-hametaveta sary tsy mendrika hita ao Avibase ianao, ny fomba tsara indrindra raha manindry fotsiny ny kisary kely eo amin'ny zoro ambany ambany ambanin'ny sary. Ny fampiasana an'ity bokotra ity dia tokony ho voafetra amin'ny fisantarana diso sy sary izay tsy misolo tena vorona. Ny sary rehetra aseho amin'io fomba io dia haverina hodinihina sy hialana raha mety. Raha irinao, dia azonao atao koa ny mandefa vato ho an'ny sary tsirairay amin'ny alàlan'ny tsindrio eo amin'ny baoritra eo ambanin'ny sary. Ny salam-pifidianana isaky ny mpitsidika hafa (raha azo atao) dia aseho eo ambanin'ny sary ihany koa. Farany, azonao atao ny mampiasa ny bokotra arrow, eo amin'ny zoro ambany ambany, mba hanova ilay sary amin'ny iray hafa karazana mitovy.
Avibase no notsidihina 279,280,266 nanomboka tamin'ny 24 jiona 2003. © Denis Lepage | Politika fiarovana fiainan'olona